Localizador familiar GPS móvil - Safe365 4.2.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.2.2 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ေနအိမ္ & အိမ္ Localizador familiar GPS móvil - Safe365
Localizador familiar GPS móvil - Safe365 ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Safe365 es una aplicación que ha sido diseñada para que puedas cuidar de tus familiares en la distancia. Encuentra y haz un seguimiento de tus hijos, abuelos o familiares ancianos en tiempo real y mantenlosasalvo graciasanuestro localizador de ubicación, la información del estado del teléfono móvil y el botón de emergencia.
Confía en Safe365 para ayudar y protegeratu familia ante cualquier situación de emergencia. Descarga la app de localización Safe365 para cuidar de tus familiares o de niños y ancianos que pertenezcanatu familia. Te recordamos que debes hacer un uso responsable de la app y que en ningún momento Safe365 te permitirá accederala ubicación de nadie sin su consentimiento.
¿Cómo funciona Safe365?
1. Descarga la app gratis!
2. Verifica tu número de teléfono móvil
3. Añadeatus hijos y abuelos para estar al corriente de su seguridad en todo momento, los cuales recibirán un enlace para descargar la app en su teléfono móvil.
4. Tus seres queridos tendrán que aceptar conscientemente que comparten su ubicación contigo. Te recordamos que sin esta aceptación, Safe365 no te permitirá conocer la ubicación de ninguno de tus contactos
5. Ya puedes empezaracuidar y protegeratu familia con el localizador familiar GPS móvil - de Safe365
Anteriormente conocida como "Alpify", una app para encontraraalpinistas en la montaña, Safe365 te avisará inmediatamente si no puede localizaratus familiares con una notificación de seguridad. Además, también podrás conocer el porcentaje de batería disponible de tus familiares, el tipo de conexiónaInternet que tienen, si están quietos o desplazándose y las distancias recorridas cada día.
¿Qué te ofrece Safe365?
✓ Ubicación de tus familiares en tiempo real
Safe365 te permite conocer la posición de de tus seres queridos en tiempo real, así como el estado en el que se encuentran sus móviles, siempre y cuando hayan aceptado compartir su ubicación contigo y hayan instalado la app en su teléfono. Padres y madres podrán cuidar, ayudar y rastrear el móvil de sus hijos en tiempo real con el geolocalizador.
✓ Avisos cuando tus familiares entran o salen de un lugar
Podrás guardar hasta9ubicaciones habituales de tu familiar: casa, escuela, trabajo, barrio y otras zonas personalizables. Safe365 te enviará avisos de seguridad cada vez que un familiar entre o salga en una de sus zonas; así como comprobar que realiza sus rutinas con normalidad. Algo especialmente útil cuando se trata de abuelos y familiares ancianos que podrían sufrir caídas u otro tipo de contratiempos.
✓ Recordatorios cuando la batería de tus familiares estéapunto de agotarse
Safe365 permite enviar avisos cuando la batería de los dispositivos de tus familiares está en situación crítica. De este modo, ellos recibirán una notificación de tu parte que les indica que deben cargar el móvil. Asimismo, Safe365 te notificará una vez estén cargando el móvil. Los avisos pueden ser activados y desactivados.
Safe365 tiene tres modalidades de ubicación para compartir: localización exacta, aproximada y ruta. Tanto tú como tus familiares podéis seleccionar y modificar siempre el tipo de ubicaciónacompartir,eincluso desactivarla si así lo deseáis. Localizarafamiliares, rastrear posición o ayudarapersonas mayores es siempre seguro con Safe365.
✓ Botón del pánico
También podrás encontrar un botón del pánico para emergencias de tus miembros familiares al pedir ayuda. Al ser una aplicación para cuidar de los tuyos, hijos y abuelos, Safe365 incluye un botón del pánico que al ser presionado les pone en contacto con los servicios de llamada de emergencia 112. Para la proteger la seguridad de su familia, les envía su ubicación ante cualquier situación de socorro siempre y cuando el afectado se encuentre en España o Andorra. Para el resto de países, Safe365 envía una alerta de emergencia SOSalos protectores, haciéndoles saber que su familiar necesita ayuda.
Safe365 သင်အကွာအဝေး၌သင်တို့၏မိသားစုကိုဂရုစိုက်နိုင်အောင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပြီးတဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်။ Find နှင့်စစ်မှန်သောအချိန်၌သင်တို့၏သားသမီးတို့, အဘိုးအဘွားသို့မဟုတ်သက်ကြီးရွယ်အိုဆွေမျိုးသားချင်းခြေရာခံစောင့်ရှောက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Locator တည်နေရာ, status ကိုသတင်းအချက်အလက်မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်အရေးပေါ်ခလုတ်ကိုနှင့်အတူလုံခြုံသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်လော့။
မည်သည့်အရေးပေါ်အခြေအနေဆန့်ကျင်သင့်မိသားစုကကူညီခြင်းနှင့်ကာကွယ်ပေးရန် Safe365 ယုံကြည်မှု။ သင့်မိသားစုပိုင်တော်မူသောသင်တို့မိသားစုသို့မဟုတ်သားသမီးများ၏ဂရုစိုက်ဖို့ app ကို Safe365 တည်နေရာ Download များနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ။ အကြှနျုပျတို့သညျမဆိုအချိန်မရွေး app ရဲ့တာဝန်ရှိအသုံးပြုမှုကိုလုပ်ရပါမည်နှင့် Safe365 သင့်ရဲ့သဘောတူညီချက်မပါဘဲမည်သူမဆို၏တည်နေရာရန်သင့်အားဝင်ရောက်ခွင့်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုသင်တို့အားသတိပေးတယ်။
1. အခမဲ့ app ကို Download လုပ်ပါ!
2. သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကို Verify
3. သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာ app ကို download လုပ်ပါမှ link တစ်ခုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်သည့်ခပ်သိမ်းသောကာလမှာသင့်ဘေးကင်းသတိထားပါရန်သင့်ကလေးများနှင့်အဘိုးအဘွားမှထည့်ပါ။
4. သင့်ချစ်ရသူသတိရှိရှိသင်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏တည်နေရာမျှဝေကိုလက်ခံရပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်ဤလက်ခံမှုမရှိဘဲ, Safe365 သင်သည်သင်၏အဆက်အသွယ်မဆို၏တည်နေရာကိုသိမသွားပါစေသောသင်သတိပေး
5. Start ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် GPS စနစ်မိုဘိုင်းမိသားစု Locator နှင့်အတူသင့်မိသားစုကိုကာကွယ်ရန် - Safe365 ၏
သင်တစ်ဦးကလုံခြုံရေးသတိပေးချက်တွေနဲ့သင့်မိသားစုနေရာချထားမပေးနိုငျပါလျှင်ယခင်က "Alpify" တောင်ပေါ်မှာတောင်တက်သမားကိုရှာဖွေ app တစ်ခုအဖြစ်လူသိများ, Safe365 ချက်ချင်းသင်သည်သတိပေး။ သူတို့နေဆဲဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ်ရွေ့လျားခြင်းနှင့်အကွာအဝေးနေ့တိုင်းခရီးထွက်လျှင်အပြင်, သငျသညျအစ, သင့်မိသားစုများအတွက်သင်ရှိသည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားကိုမရရှိနိုင်ဘက်ထရီ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုသိပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်အရာကို Safe365 ကမ်းလှမ်း?
Safe365 သငျသညျသူတို့ဖုန်းများရှာတွေ့သည့်အတွက်အမှန်တကယ်အချိန်အဖြစ်ပြည်နယ်၌သင်တို့၏ချစ်ရသူရဲ့အနေအထားကိုသိပါပေးတယ်, သူတို့သင်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏တည်နေရာမျှဝေ app အားသင်၏ဖုန်းတွင် install လုပ်ထားရှိသည်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ မိဘတို့, အဘို့ဂရုစိုက်အကူအညီနှငျ့ geolocation နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ကလေးများမိုဘိုင်း Real-time ကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။
အိမ်, ကျောင်း, အလုပ်, ရပ်ကွက်အတွင်းနှင့်အခြားစိတ်ကြိုက်ဒေသများ: သင်သင့်မိသားစု၏9စံနေရာများမှတက်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။ ယင်း၏ဒေသများ၏တဦးတည်းအတွက်တစ်မိသားစုဝင်သို့မဟုတ်ထွက်ခွာအခါတိုင်း Safe365 ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသတိပေးချက်များပေးပို့လိမ့်မည် အဖြစ်ကောင်းစွာပုံမှန်အားဖြင့်ဖျော်ဖြေလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စစ်ဆေးနေသည်။ ဘယ်ကရေတံခွန်သို့မဟုတ်အခြားတွေလည်းရှိတတ်တယ်ခံရစေခြင်းငှါ, အဘယ်သူသည်အဘိုးအဘွားများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများဆွေမျိုးများမှကြွလာသောအခါအထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။
သင့်မိသားစုများ၏ဘက်ထရီ device ကိုဝေဖန်အခြေအနေအခါ Safe365 သတိပေးချက်များပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကမိုဘိုင်းကိုအားသွင်းဖို့သူတို့ကိုပြောထားသည်သည်သင်တို့မှအကြောင်းကြားစာလက်ခံရရှိသည်။ သင်ဖုန်းကိုအားသွင်းနေကြသည်တစ်ချိန်ကသင်တို့ကိုလည်းအကြောင်းကြား Safe365 ။ နှိုးစက် activated နှင့်အားပိတ်ပြီးနိုင်ပါသည်။
Safe365 တည်နေရာဝေမျှဖို့သုံး Modes သာရှိပါတယ်: အတိအကျတည်နေရာ, အနီးစပ်ဆုံးလမ်းကြောင်းကို။ သင်နှင့်သင့်မိသားစုကို select နှငျ့သငျတည်နေရာခွဲဝေမှုအမျိုးအစားကိုပြောင်းလဲအခါတိုင်း, သင်နိုင်အောင်လိုလျှင်တောင်မှသူကကို turn off နိုင်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်များ Locate, လမ်းကြောင်းအနေအထားသို့မဟုတ်ကွီးရှယျအိုမြားကိုကူညီအမြဲ Safe365 နှင့်အတူလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။
✓ထိတ်တလန် button ကို
သင်တို့သည်လည်းအကူအညီတောင်းသင့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေများအတွက်အရေးပေါ်ထိတ်တလန် button ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင့်မိသားစု, ကလေးများနှင့်အဘိုးအဘွားများ၏စောင့်ရှောက်မှုယူ application တစ်ခုဖြစ်ခြင်း, Safe365, ဖိအရေးပေါ်န်ဆောင်မှုနှင့်အဆက်အသွယ်သို့သူတို့ကိုငါဆောင်တတ်၏သည့်အခါသင့်မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးရန် 112. ကိုခေါ်မယ့်ထိတ်လန့်ခလုတ်ကိုလည်းပါဝင်သည်သူတို့ကိုသင့်တည်နေရာကိုပေးပို့ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံသကဲ့သို့ရှည်လျားမည်သည့်အခြေအနေ၌ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းစပိန်သို့မဟုတ်အင်ဒိုရာ၌ရှိကြ၏။ ရှိသမျှသည်အခြားသောနိုင်ငံများအဘို့, Safe365 သူတို့မိသားစုအကူအညီနဲ့လိုအပ်နေသည်ဟုအသိပေးတစ်ဦးအရေးပေါ်အရေးပေါ်စောင့်သတိပေးပေးပို့သည်။
Localizador familiar GPS móvil - Safe365 အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Localizador familiar GPS móvil - Safe365 အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Localizador familiar GPS móvil - Safe365 အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Localizador familiar GPS móvil - Safe365 အား အခ်က္ျပပါ
toniog စတိုး 14 5.12k
Localizador familiar GPS móvil - Safe365 ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Localizador familiar GPS móvil - Safe365 အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://static.alpify.com/tc/tc_es.html
App Name: Localizador familiar GPS móvil - Safe365
Release date: 2019-09-07 13:05:38
လက်မှတ် SHA1: E0:CA:36:E1:07:FD:35:0E:E6:33:25:F1:26:40:22:B8:BE:D6:EB:2D
အဖွဲ့အစည်း (O): Grup Basera SL
နိုင်ငံ (C): 31
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Andorra
Localizador familiar GPS móvil - Safe365 APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ